site ha na 20-12-19
Mbibi nke Compostable bụ njedebe nke mbibi, nhazi nke gburugburu ebe obibi microbial, oge mbibi, ọkọlọtọ na mmetụta na gburugburu ebe obibi. European Union nwere nkọwa maka nke a, nke a kọwara dị ka "ihe compostable". Dabere na EN13432, co ...
Gịnị bụ ihe na-emebi emebi
Nkọwa nke bioplastics: ọ bụrụ na plastik sitere na bio, a kọwara ha dị ka bioplastics, biodegradable, ma ọ bụ ha abụọ. Bio base na-ezo aka na ngwaahịa ahụ (akụkụ) sitere na biomass (osisi). Bioplastics sitere na ọka, okpete ma ọ bụ cellulose. The biodegradation nke bioplastics na-adabere na ya chemical struc ...
Ahụkarị ngwa nke polylactic acid bioplastics
Pdị ngwa nke polylactic acid bioplastics PLA n'onwe ya bụ nke aliphatic polyester, nke nwere njirimara dị iche iche nke ihe polymer n'ozuzu, arụmọrụ arụmọrụ dị mma na obere ịda mbà. Enwere ike iji ya maka ọtụtụ plastik sịntetik. Ọ na ọtụtụ-eji mee pa ...
Kedu ihe dị iche na nke na-emebi emebi, nke na-emebi emebi na nke na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma?
Plastics plastik na plastik biodegradable bụ ihe eji eme gburugburu ebe obibi ma na-adigide ihe eji agbanwe plastik ndị a na-ejikarị mmanụ ala. "Mbibi," biodegradable "na" compostable "bụ okwu ndị mmadụ na-ekwukarị mgbe ha na-ekwu okwu ...
Ihe nkiri a na-ere ere na-ere ere, Kechie Biodgradable Cling Kechie, Akpa Compostable, Akpa mkpofu Compostable, Akpa mkpofu ahịhịa na-ere ere, Eco Cling Kechie Sugar Kechie,